Ntuziaka Maka entallọ Ọgwụ Na-ahọrọ osdị Ziri Ezi Zirconia-News-VSmile Co., ltd
Ntuziaka Maka entallọ Ọgwụ Nhọrọ Thehọrọ Cordị Ziri Ezi Zirconia
Oge: 2020-12-04 ikwu:154
Imirikiti omume eze na-agbanwe site na okpueze PFM dị iche iche ma na-agagharị na ojiji nke zirconia maka ịmepụta ndozi eze. N'ihi na zirconia okpueze na àkwà mmiri nwere magburu onwe ha esthetics na ndị fọrọ nke nta-emebi emebi, zirconia na-aghọ ndị kasị ewu ewu na ihe maka ime eze eze okpueze na ndị ọzọ na mweghachi. e nwere ọtụtụ ụdị na ahịa, Nacera, BruxZir, Sagemax, KATANA wdg ị na-eche ihu ọtụtụ puku usoro sitere na ndị nrụpụta dị iche iche, ụlọ ọrụ ahia. mana otu esi eme nhọrọ ziri ezi iji gboo mkpa gi?
Ka anyị soro Vsmile na-eso, anyị na-enye gị azịza ya.
MGBE AH Z ZIRCONIA
Mgbochi zirconia siri ike, ma ọ bụ "monolithic zirconia" bụ opaque, a na-atụkarị aro maka okpueze azụ. siri ike zirconia nwere ihe ndị na-eme ka mmiri sie ike karịa zirconia translucent dị elu, na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adịgide adịgide iji nagide ike ịta nri ma na-egweri. ihe a bara uru karịsịa maka ndị ọrịa nwere ike ịta ikikere ezé. naanị ntakịrị nhichapụ ka achọrọ maka ụdị mweghachi a, ọ dịkwa obere uwe na ezé na-emegide ya. Solid zirconia dịkwa oke irè maka ikpuchi preps ezé nwere agba agba, ọkachasị ndị gbara ọchịchịrị n'ihi ọgwụgwọ eze gara aga, dịka post na isi ma ọ bụ iweghachi eze.
Ka anyị zute ngwaahịa ndị nnọchi anya anyị nke zirconia siri ike na Vsmile zirconia famliy nke anyị kpọrọ "HT Zirconia Ngọngọ"Na"Ogwe ST Zirconia", ihe ngwọta kasị mma maka okpueze ikpeazụ,full ngwe Bridge, abutment, inlay & onlay making.
Zirconia UT (49% Ultra High Translucent), na 700 MPa, dị ike karịa nkwụghachi-gwakọtara-na-metal (PFM) ma weghachite ntụgharị na-agbanwe agbanwe. Ihe kachasị mkpa maka ụdị ihe a enweghị 100% enweghị ọla , a atụmatụ na-egbochi gingival agba ọchịchịrị na-ewepụ ohere nke na-ekpughe dara n'akụkụ ma ọ bụrụ na chịngọm nlaazu amalite.
Ha bụ ihe okike, na-ebunye agba nke ezé dị n'akụkụ, ma nwee ike dakọtara na ndò ọ bụla, na-eme ka zirconia dị elu nke dị mma maka akwa mmiri ruo mpaghara 3 n'ogologo.
MGBE EGO EGO ZIRCONIA
Na mbido, naanị mkpụrụ akụkụ-acha ọcha nwere ike mepụta maka okpueze zirconia, nke nwere ike ibute nsogbu mgbe ụfọdụ iji nweta ọdịdị mara mma-zuru oke. Otú ọ dị, ugbu a, ọhụụ ọhụrụ nke ihe ndị ahụ nwere ihe ndò na-echekwa echepụta ma nwee ike ịmepụta ya iji nye mweghachi dị mma na nke zuru oke zuru oke na obere nha nha nha, nzukọ ma ọ bụ ọbụlagodi oke ndidi chọrọ ọrụ dị elu! Ka ọ dị ugbu a, ọchịchọ maka zirconia karịrị nnọọ mkpa maka PFM, na mweghachi ụdị ndị ochie a na-aghọ ihe gara aga.
Mgbe ọtụtụ afọ nke ịrụsi ọrụ ike gasịrị, anyị malitere "STCO Zirconia Ngọngọ"na "UTCO Zirconia Block"izute gị dị iche iche chọrọ maka denture Ndinam.
Iji ojiji mbu nke zirconia nwere ike ịchekwa ndị ọrịa gị ihe karịrị awa atọ ebe ọ bụ na ọ dịghị mkpa maka shading mmiri ma ọ bụ oge ihicha. N'ihi ìhè okike sitere n'okike na ọnọdụ ọkụ ọ bụla — ma ọ bụ ìhè ehihie, anwụ ma ọ bụ oji oji — mweghachi ga-adị ka okike. ọ dịghị ihe pụrụ iche na-enwu ọkụ chọrọ.
Layered zirconia bụ translucent na opalescent, mana n'adịghị ka zirconia siri ike, ọ dabara adaba maka okpueze ihu. Ọ bụ ezie na a na-ejikarị ya maka okpueze dị n'ihu, enwere ike iji zirconia na-enweghị ike iji mee ka okpueze dị ma ọ bụrụ na enwere ohere zuru ezu. Mgbe emechara ya, enwere ike rụpụta nsonaazụ kachasị mma. Ma okpueze zirconia siri ike na nke nwere ogologo nwere ike na nkwụsi ike nke yiri nke mweghachi PFM ọdịnala, mana ha na-enye ọmarịcha mma dị elu.
Biko lee anya mmadụ anọ ndị a ma ama: "STML""UTM""SHTM""3D gbakwunyere".
nwere ike iji aka ha mee ihe ngosi niile.
PREV: Merry Chrimas & Ezi afọ ọhụrụ
OSOTE : Ntuziaka Nhọrọ Mkpa
Vsmile Clear PMMA Maka aru Splint